China Shuttle Mover System orinasa sy mpanamboatra |Ampahafantaro
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny rafitra shuttle mover dia nivoatra ho fitaovana fanaterana vaovao mora ampiasaina, mitsitsy angovo ary tontolo iainana amin'ny indostrian'ny logistika.Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana organika sy ny fampiharana ara-drariny ny shuttle mover + radio shuttle miaraka amin'ny trano fanatobiana matevina, dia afaka mampifanaraka tsara kokoa amin'ny fampandrosoana sy ny filàn'ny orinasa.
Tsy mitovy amin'ny AS / RS, ny rafitra shuttle mover dia trano fitehirizam-bokatra mandeha ho azy tanteraka, izay mahatsapa ny fampiasana bebe kokoa ny toerana fitehirizana entana ary afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fidirana sy fivoahana.
Fitsipika fototra miasa:
1. Inbound: Rehefa avy nahazo ny vaovao momba ny entana miditra ny WMS, dia manome habaka entana mifototra amin'ny toetran'ny entana izy, ary mamoaka torolàlana miditra.Ny WCS dia mandefa fitaovana mifandraika amin'izany hanaterana entana ho azy any amin'ny toerana voatondro;
2. Mivoaka: Rehefa avy nahazo ny vaovao momba ny entana mivoaka ny WMS;miteraka toromarika mivoaka araka ny toerana misy entana.Ny WCS dia mandefa fitaovana mifandraika amin'ny fandefasana entana ho azy any amin'ny faran'ny fivoahana.
Mampidina malalaka sy misintona entana amin'ny alàlan'ny alalàn'ny sub-lane ho toy ny singa fitahirizana, ary ny zotra lehibe ho lalana fitaterana;araka ny fisehon'ny lanes, dia azo zaraina ho: lafiny roa sy ny afovoany layout.
□ Ny zotram-piaramanidina sy ny lalamby dia apetraka eo amin’ny lafiny roa amin’ny racking:
· Fomba fiantsonan'ny radio: voalohany mivoaka voalohany (FIFO);
· Fomba fidirana sy fivoahana: lafiny tokana miditra sy mivoaka;
□ Ny zotram-pitaterana sy ny lalamby dia napetraka eo afovoan'ny racking:
· Fomba fampielezam-peo: voalohany amin'ny farany (FILO);
· Fomba miditra sy mivoaka: miditra sy mivoaka amin'ny lafiny iray
Tombontsoa amin'ny rafitra:
1. Ny fitambarana tonga lafatra amin'ny fitehirizana mafonja sy ny rafitra automatique;
2. Fitehirizana automatique tanteraka amin'ny paleta betsaka;
3. Ny rack semi-automatique raido dia azo havaozina amin'ny fomba ara-dalàna, mba hifandraisana amin'ny rafitra famokarana sy lozisialy mba hahazoana fifandraisana tsy misy dikany.
4. Fepetra ambany ho an'ny trano fanatobiana entana sy ny haavon'ny gorodona ao anaty trano fanatobiana entana;
5. Ny firafitry ny trano fitehirizam-bokatra dia miovaova, miaraka amin'ny gorodona maro sy ny fandrindrana isam-paritra mba hahazoana fitahirizana mandeha ho azy tanteraka;
Vao haingana, NANJING INFORM STORAGE EQUIPMENT (GROUP) CO., LTD sy Inner Mongolia Chengxin Yong'an Chemical Co., Ltd. nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa momba ny famolavolana, fanamboarana, fametrahana ary fametrahana rafitra fanatobiana mandeha ho azy.Ny tetikasa dia mampiasa vahaolana amin'ny rafi-pandehan'ny shuttle, izay indrindra indrindra dia ahitana fiara amin'ny racking, radio shuttle, shuttle mover, reciprocating ascenseur, layer fanovana ascenseur, conveyor tsipika, ary rindrambaiko.